ကျွန်မမှာ မင်းသမီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်မမှာ မင်းသမီး
Posted by မြသဲ ( 17082011 ) on Aug 26, 2014 in Creative Writing | 25 comments
ကျွန်မမှာ အကသင်ဖို့ကိစ္စဖြစ်လာပါတယ်။ မှတ်မှတ်ယယ ခြောက်တန်းနှစ် ( ၁၉၈ရ ) ရာတန်တွေ ( အဲ့ အစိတ်တန်လား ရာတန်လားသေချာမမှတ်မိ ) တရားမဝင်ကြေငြာလိုက်တော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြလေတော့ ကျွန်မတို့ကျောင်းလေးတွေလဲ တလခွဲ နှစ်လလောက် ရောယောင်ပိတ်တဲ့ထဲပါသွား သပေါ့။ နဂိုကမှ ညနေကျောင်းပြီးတာနဲ့ အိမ်တန်းမပြန်ပဲ တောတိုးခြုံဝင်ရွာပါတ်ဆော့တဲ့အမျိုးမို့ ဒီတခါကျောင်းပိတ်တာကတော့ ကျွန်မအတွက်ဆုလာဘ်တပါးဖြစ် သလို မိဘများအတွက်တော့ အင်မတန်ခေါင်းခဲစရာပေါ့ရှင်။ အဲ့အချိန်မှာပဲ မြို့က အနုပညာဝါသနာရှင် ဆရာဝန်မတယောက်က ပတ ္တလားသင်တန်းနဲ့ အကသင် တန်းဖွင့်ပါလေကော။ ကျွန်မလိုမိန်းမပီသသူအတွက်ကတော့ ဘုန်းကြီးနဲ့ဘီးလို လားလားမှမဆိုင်တဲ့သင်တန်းပေါ့။ သို့သော် အိမ်ကတော့ ဗိုင်းကောင်းကျောက် ဖိဖြစ်အောင် အကသင်တန်းကိုပို့လိုက်တယ်။ :p: မြင်ကြည့်ကြပါအရပ်ကတို့ရယ်။ လမ်းလျှောက်တာတောင် ကားယားကားယား ဇာတ်တောက် ဇာတ်တောက် လျှောက်တဲ့သူက အကသင်တန်းရောက်သွားတဲ့အခါမယ် အတော်လေးကို မတော်မတဲ့ဖြစ်တာကိုပေါ့။ အကသင်တန်းရောက်တော့ ပထမဆုံးသင်ရ တာကတော့ ကဗျာလွတ် ပါ။ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို တတောင်လောက်ချဲ၊ ဒူးကိုတဝက်ကွေး၊ ဖနောင့်နှစ်ခုကိုနီးအောင်ထား၊ ခြေဖျားနှစ်ခုကိုခွဲ၊ ခါးထောက် အောင် မယ်လေးနှစ် ရက်လောက် အဲ့ဒါကို အသားသေအောင်လုပ်ရတယ်။ လှုပ်စိရွခတ်နေတဲ့သူအတွက်တော့ ဒီသင်ခန်းစာဟာ အတော်ကိုဒါဏ်ပေးတယ်လို့ခံစားရ တယ်။ နောက် သင်တန်းကလဲ တနေကုန်ရှင့်။ အိမ်ကလဲ မကောင်းကျောင်းပို့လားမသိပါဘူးရှင်။ နှစ်ရက်လောက်အသားကျတော့မှ ခြေထိုး၊ မေးထိုးစသင်ရတယ်။ ကွတကွတ နဲ့ပေါ့။ အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဒူးတွေချောင်၊ ပေါင်တွေညောင်းပေါ့။ :chee: တီးလုံးကတော့ မြန်မာ့အသံက သတင်းလာခါနီးလာလေ့ရှိတဲ့တီးလုံး။ တုံတုံတုံတုံ တုံတုံတုံတုံ ဆိုတဲ့တီးလုံး။ အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မတို့ကလဲ လူမဆော့ရတော့ ပါးစပ်ဆော့သပေါ့။ အဲ့တီးလုံးကို စာသားလေးထည့်လိုက်တယ်။
ရိုက်ကုန်ပြီ ဂျိ သတ်ကုန်ပြီ
အမယ်တယ်ဟုတ်။ ပထမအုပ်လိုက် တယောက်တပေါက်ကနေတာမယ် ဒီစာသားလေးလဲသွပ်လိုက်ကော လိုက်ဆိုရင်းကလိုက်တာ ယိမ်းသမတွေအရှုံးပေးရတယ် ညီလို့။ ကဗျာလွတ်နှစ်ပါတ်လောက်သင်ပြီးတော့ တခြားအကလေးတွေသင်တယ်။ နောက်ထမသိမ်းကို အနားခပ်တာသင်ရတယ်။ အမေ့ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင် ငွေတ ဆုပ်ထမီကိုအတင်းတောင်းပြီး အောက်ကရေသီနားထည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ထမီနားခပ်သင်ရတယ်။ လုံးလိုက်ထွေးလိုက် မှောက်ရက်လဲလိုက်နဲ့။ တဝါးဝါး နဲ့ပျော်ဖို့တောင်ကောင်းသေး။ အဲ့မှာ အကပိုးဝင်သွားပြီး ကြီးရင် အငြိမ့်မင်းသမီးလုပ်ဖို့တောင်စိတ်ကူးလိုက်သေး။ ထမီခပ်တာလဲ တပါတ်လောက်မှနဲနဲလေးမှောက် ရက်မလဲတော့တာ။ နှစ်ပါတ်လောက်ကြာမှ ဝဲကနဲဝဲကနဲလှလှလေးခပ်နိုင်တာ ( ဒါကတော့ ကွ့ကိုယ်ထင်တာပါ )။ :buu: နောက်ဆုံးတော့ သင်ရတာ ဆီမီးခွက် အက။ အောင်မယ်လေး အိုက်မှာသေတော့တာပဲ။ တသက်လုံးကမြင်းကြောထလာပြီး ဘာလေ့ကျင့်ခန်းမှမလုပ်တဲ့သူတွေ ခါးနောက်ကိုလှန်ဆိုလဲဆိုရော တဝက်တောင်အနိုင်နိုင်။ အတောင့်လိုက်ကြီးတွေ။ ရှေ့က ထမီစကို သုံးယောက်လောက်ဝိုင်းဆွဲ ကိုယ်ကခါးချိုးချ၊ ထမီတွေပြဲ။ အိုဖြစ်ချင်တိုင်းကိုဖြစ်နေတော့တာပဲ။ ပထမတော့ ဆီးမီးခွက်နဲ့ချည်းကရတာ။ နောက် အချိုးကျတော့မှ ဖယောင်းတိုင်သေးသေးလေးတွေထွန်းပေးတယ်။ ညော်နံ့လေးတွေတသင်းသင်းနဲ့ပေါ့။ နားရွက် နားကပ်ကပ်ဝိုက်ယူတော့ ဆံပင်မီးလောင်တာ။ :harr: အဲ့အကသင်တာအားတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ ပတ ္တလားခန်းဝင်ကြည့်၊ စပ်စုပေါ့။ ဟိုဝင်ခေါက်ဒီ ဝင်ခေါက်ပေါ့။ အောင်မယ်လေး ခက်လိုက်ချက်။ ထန်တျာတေရှင် ထန်တျာတေရှင် ဒရန့်ဒရန့် ထက်ပိုမတတ်ခဲ့ဘူး။ တတ်လာတာကတော့ အပြန်တရာသေဘီ အပြန်တရာသေဘီ တကျပ် တကျပ်။ ဟုတ်တယ်လေ သင်လို့မှမတတ်နိုင်တာ အပြန်တရာလောက်သေချင်တာပေါ့လို့။ အဲ့ကနေမှ စည်းနဲ့ဝါးသင်ရတယ်။ တယောက်ချင်းကတာကို ဆရာမက စောင်းနဲ့သီချင်းဆိုပေးတာကို ကျန်တဲ့သူတွေက စည်းနဲ့ဝါး လိုက်ပေးရတယ်။ ကျွန်မအလှည့်ရောက်တော့လဲ လိုက်ပေးရ သပေါ့။ အားရပါးရလိုက်လိုက် တာ သီချင်းတပုဒ်လုံးလဲဆုံးကော ဆရာမက နင့်ဟာက စည်းနဲ့ဝါး လိုက်တာကပြောင်းပြန်ကြီးတဲ့။ :harr:
အိုက်ဒါနဲ့ ကျောင်းတွေလဲပြန်ဖွင့်ကော အငြိမ့်မင်းသမီးလဲဒီတသက်ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိတော့မှန်း ကွ့ကိုယ်သဘောပေါက်ပြီး မင်းသမီးရည်မှန်းချက်ကြီး ကိုစွန့်ပစ်လိုက် ပြီးကျောင်းသာပြန်တက်ခဲ့တော့ သပေါ့ရှင်။
အကသင်ဖို့ကိစ္စဖြစ်လာတဲ့… ( ၁၉၈ရ ) အစိတ်တန်တွေ ….တရားမဝင်ကြေငြာတဲ့ အချိန်
အရင်တုန်းက ကိစ္စတွေတော့ သိပ်စိတ်မဝင်စားတော့ပါဘူး ။
အခုတော့ ဖွေးဖွေးကို ဂျစ်တာပဲ..သိတယ် ။
တဲသီ အငြိမ့်မင်းသမီးဖြစ်ရင်…ဖွေးဖွေးလောက် လှပါ့မလား… ။
အတည်မပြောတတ်တော့လို့… ဖြစ်သလိ်ုလေး နောက်သွားပါတယ် ။
စည်း နဲ့ ဝါး ဟန်ချက်ညီရမယ်တဲ့ အဆို အက သင်တဲ့အခါမှာလေ။
ဪ စည်း နဲ့ ဝါး
စည်း နဲ့ ဝါး
အဟိ အိုက်စည်းနဲ့ဝါးက သင်လို့ကိုမရခဲ့။ အဲ့လိုအနုပညာနဲ့နီးတာ
အကကျောင်း သွားမဲ့ အစား ဘော်လုံးအသင်း ထဲ ဝင်လိုက်ရင်မှ မြန်မာ့လက်ရွေးစဉ် ဖြစ်နေလောက်ပြီ။
ဟုတ်ပါ့အရီးရယ် စောမွေးလ်ုက်လို့ပါဆို။ မဟုတ်ရင်သန်းသန်းထွေးလောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်
နိုမိုဆို စင်ကာပူပြန်မွသဲ တို့ ဘိလပ်ပြန်မွသဲတို့
အခုတောရွာထဲ CJ ယောင်ယောင်
ဟုတ်ပါ့ကိုချိုရယ်။ အမေဒစ်ကန်မှာသဂျီး ဒေါ်လှတွေ ပန်းကုံးလုပ်စွပ်ပေးတာတောင် ရချင်ရနေမှာ။ အခုဒေါ့ ပွိုင့်လေးတောင်မတိုး အဟိကြုံတုန်းလိုချင်တာတောင်းတာ
သများးး လေ ဆိုကရေးးတီးး မှာဝင်ပြိုင် ဖို့ ထိ က ဖူးးး တယ်။
အိပ်မက် လို ပဲ။ ခုတော့ ချိုးး စရာ ခါးး မရှိလို့ ပြန် က တဲ့ အချိန် မှာ အလွဲတွေ!!!
ယောက်ခမွ လွဲ တာတွေ က ပို ရီ ရ တယ်။
တွေ့ ရင် တူူတူ က ကြမယ်…….
အဟိချွေးမွလေး ဟောဒယောက်ခမွနဲ့တူတာတွေများလိုက်တာ။ အခုတော့ချိုးစရာခါးလဲချိဒေါ့ပါဘူးဟယ်။ ပြန်လာရင်တော့ ဝတုတ်ယိမ်းကရင်ရမယ်ထင့်
သများလည်​း အကဝါသနာပါတယ်​.. သင်္ကြန်​မင်​းသမိီး​လောက်​​တော့ ြြဖြစ်​ဖူးတယ်..
တီသဲ​ရေးဟန်​က ​ဘေးက​နေ အားရပါးရထိုင်​​ပြောပြ​နေသလိုပဲ… ရယ်​လည်​းရယ်​ရတယ်​.. ဖတ်​လို့လည်​း​ကောင်​းတယ်​.. .​​
တကယ်တော့ အက ကကိုယ့်ဝါသနာကိုမဟုတ်တာ။ အိမ်ကလိုက်ခဲ့ဆိုခေါ်ပြီးအတင်းအပ်ခဲ့လို့သာ ဆင်မယဉ်သာနဲ့ကိုယ်နဲ့က လားလားမှမဆိုင်
မူလတန်းတုန်းက ကျောင်းတိုင်းလိုလို အသင်မနေရ ကဗျာလွတ်အက သင်ရတာကို မှတ်မိတယ် ..
တခြားအကတွေကတော့ ကျောင်းကပွဲတွေမှာကဖို့ ဝါသနာပါတဲ့သူတွေကို ရွေးပြီး သီးသန့်သင်ရတယ် ..
ဆီးမီးခွက်အကနဲ့ စင်ပေါ်တက်ကခဲ့ဖူးတယ် ..
အကပိုးထပြီး အိမ်မှာ အမေ့ထမီကို တရွတ်တိုက်ဆွဲအောင်ဝတ်ပြီး ကခဲ့တာတွေ .. စောင်ကိုပတ်ပြီးကခဲ့တာတွေ .. တီးလုံးသံကြားရင် တစ်ကိုယ်လုံးငြိမ်ငြိမ်နေလို့မရအောင် ကချင်ခဲ့တာတွေက အခုတွေးလိုက်ရင် ယုံချင်စရာတောင်မရှိ …
ငယ်ဘဝကို ခဏလွမ်းသွားတယ် ..
အဟိဒီရွာထဲ တူတာတွေအတော်များတယ်။ ပျော်ဇရာကြီး စိတ်တူကိုယ်တူတွေ
.ထိုးဖြစ်ရင် မွသဲရယ် ကေဇီရယ် ရွာထဲက အပျိုတော်တွေရယ် ယိမ်းကဖို့ခေါ်ရမယ်
အာဟိ ခါးတော့ချိုးခိုင်းနဲ့တော့နော် အုပ်ကထဂျီး ခြေထိုးမေးထိုးလောက်ပဲလုပ်
ရွာထဲမှာ ပေါက်ကရပျက်လုံးထုတ်မယ့် လူ ရွှင်တော်လဲရှိ
မညီအောင်ကမယ့် ယိမ်းမင်းသမီး တွေ လဲ ရှိ ဆိုတော့
2015 သင်္ကြန်မှာ မဏ္ဍပ်ထောင်မယ်။
ဘူ စပွန်းဇာ ပေး မည် လဲ
ဟိ လေးပေါက်စပွန်စာရှာလိုက် ဒီကတော့ ကဖို့အသင့်
စပွန်ဆာက တော့ ရှာလို့ လွယ်တယ် နော်
ခရိုဆီးရီးစ် ထဲ ဝင်ရှာလိုက်ရင် ရတယ်
နောက်မှ ဘာဖစ် ညာဖစ် မကွိုင်ရ
အဲ့လာ လေး လာ ပြော တာေ အ့
အိ ညားဒို့ ကပဲကမာနော်လေးပေါက် အဟိ ဟိုခရိုဒွေတော့ ကြောက်တယ်တော့
. မြန်မာမိန်းခလေးတွေ မြန်မာအကနဲ့ ရင်းနှီးတာကောင်းတယ်လို့မြင်ပါတယ်မွသဲရေ
. မြန့်မာယဉ်ကျေးမှုကို တန်ဖိုးထားချင်တဲ့ စိတ်လေး နဲနဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်သွားရင် အကျိုးရှိတာဘာဘဲ
. ကျောင်းတွေမှာ ဘက်စုံထူးချွန်ဆိုရင် မြန်မာ့တူရိယာတီးတာရယ် စည်းဝါးလိုက်တာရယ် က.တာရယ်ကို
. ကျောင်းသားအားလုံးအတွက် အားကစားအချိန်ဆိုတာရှိသလို အနုပညာလေ့လာလိုက်စားဖို့အချိန်
စာကြည့်တိုက်သွားဖို့အချိ်န် multimedia room သုံးဖို့အချိန်ဆိုပီး ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးနို်င်ရင်ကောင်းမယ်
. ဘာသာရပ်တစ်ခုစီအတွက် နည်းပြတစ်ယောက်စီနဲ့ပေါ့လေ
ဟုတ်တယ်ရွှေအိရေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမလဲ ကားတားကားတား ဇာတ်တောက်ဇာတ်တောက်နေရာက အကလဲသင်ပြီးရော အတော်လေး ညင်သာသိမ်မွေ့သွားတာ လက်တွေ့။ အိမ်ကလဲအဲ့လိုတွေးမိလို့နဲ့တူပါရဲ့ အကသင်တန်းကို အတင်းကောအဓမပို့လိုက်တာ မဟုတ်ရင် ယောက်ကျားလျှာတောင်ဖြစ်မလားပဲ
ရွှေအိလေးစိတ်ကူးယဉ်တာကတော့ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာတွေပါပဲ သို့သော်———————– :byee:
သဲရေ…သများကတော့ မကလိုက်ရတဲ့ မင်းသမီးပါနော်…
ဆရာမတွေက ကျောင်းကပွဲအတွက် အချောလှလေးတွေ ရွေးတော့ ကိုယ်ပါတာပေါ့နော်…:)
ခါးမချိုး လက်မချိုးရတဲ့ ရခိုင်အက ကိုတောင် ခါးမကျိုး လက်မကျိုးလို့ အကသင် ဆရာမက ကိုယ့်ကို အရံတဲ့..
ဘာရမလဲ မင်းသမီး မလုပ်ရရင်နေ အရံတော့ လုပ်နိုင်ပေါင်တော်…
အဟိ မွအိကမှ အရံဖြစ်သေး သများကတော့ ကွ့ကိုယ်သာကရတာ စင်နားတောင်မသီဖူးဘူးရယ်
ဘဝမှာလူရှေ့ ၃ခါကဖူးတယ်… ၉နှစ်သမီးလောက်မှာ မြို့က တကယ့်ပွဲကြီးမှာ အေရိုးဗစ်နဲ့ ပန်းပွားကတယ်… အမှတ်တယက အေရိုးဗစ်
ကျင့်ရတာ နေ့စဉ်.. ကလေးဆိုတော့ ပျင်းလည်းပျင်း မောလည်းမော.. တကယ့်နေ့မှ တကယ်ကမယ်ဆိုပြီး ခိုတာ…
ဆရာကဆူလည်း ပေကပ်ကပ်… ဆရာကပြောတယ် ငါရွေးတာ လူတွေပဲထင်တာ ဗျိုင်းတကောင်ပါလာတယ်တဲ့
ဗီဒိုတွေဆွဲထားတာပြန်ကြည့်တော့ အေရိုးဗစ်ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ် ပန်းပွားမှာ ရှေ့ဆုံး အလယ်မှာလည်းနေသေး မျက်နှာက စူပုတ်ရုံမက
မျက်မှောင်တောင်ကြုံ့ထားသေး ကနေတာ… ရှက်ထာ.. နောက်ဆုံးတစ်ခေါာက်ကတော့ ခက်ခက်ခဲခဲပဲ… ချင်းပြည်သွားရင်း အတင်းဆွဲခံရလို့